“Haricot vert” 1 tasy …. misoroka aretim-po
Baranjely ; naman’ny hatsaran-tarehy
Legioma iray tsy fihinan’ny ankamarontsika matetika ny baranjely nefa legioma tena tsara no mahasalama ary naman’ny hatsaran-tarehy amam-bika ihany koa.
Ranona voatabia ; mahasalama no sady mahasoa
Akora iray anisan’ny miantoka ny fahasalaman’ny vatana ny ranona voatabia. Ankoatra ny fampiasana azy amin’ny sakafo dia vokatsoa maro no entina na eo amin’ny resaka fahasalamana izany, na eo amin’ny fikolokoloana ny endrika.
Voana zavoka : Mahatsara tarehy
Ao anaty fahavokaran’ny zavoka isika. Fantaro fa ankoatra ny nofony izay manan-karena otrikaina maro dia azo atao tsara ihany koa ny mampiasa na mihinanana ny voana zavoka.
Ranom-pary : Tena tsara ho an'ny bohoka
Manan-karena vitamina sy mineraly ny ranom-pary. Tsara ho an'ny vehivavy bevohoka ny misotro azy noho izay otrikaina entiny izay. Ireto misy tombontsoa vitsivitsy entin’ny fisotroana na ny fihinanana azy.
Voam-boaloboka : Misoroka homamiadana, manadio rà…
Fihetsika mahazatra foana ny manary ny voan’ny voaloboka rehefa mihinana azy. Raha ireo voka-pikarohana natao anefa dia ao anatin’ireny voany ireny no tena itoeran’ny heriny, ka mahasalamana ny vatana.
Voasary : Misoroka fahanterana!
Fianakavian’ny « agrumes », izay miaraka amin’ny papelemosy, ny voasarimakirana, ny voasary laoranjy.
Voana papay : Manadio aty, miaro ny voa…
Aza ariana intsony ireny voana papay ireny fa itoeran’ny vokatsoa maro ho an’ny fahasalamana. Santionany amin’izany ireto atoro anao ireto.
Legioma mitondra otrikaina maro ary ahitana « antioxydant » matanjaka ny « haricot vert ». Mahasalama izy ary mampihena ihany koa.
Mampitony ny fanelingelenan’ny fitsaharam-pitsaihana
Araka ny voka-pikarohana iray dia manampy ny vehivavy hiatrika ny fitsaharam-pitsaihana ny “haricot vert”. Mihena kokoa ireo fanelingelenana mifandraika amin’ny fitsaharam-pitsaihana, toy ny aretin-kibo, ny fiakaran’ny hafanana, ny fahalemen’ny taolana… rehefa zatra mihinana ity legioma ity isan’andro ny vehivavy 45 taona no ho miakatra.
Isan’ireo legioma ahitana “antioxydant” matanjaka sy vitamina C ny “haricot vert”. Ireo singa hita ao anatiny ireo dia mampihena ny taha mety hisehoan’ny homiadan’ny nono, na tsinay be amin’ny olona iray, hoy ireo mpikaroka avy ao amin’ny oniversiten’i Deakin, Aostralia.
Ho an’ireo te-hampihena vatana, fantaro fa 25 kalôria fotsiny no entin’ny “haricot vert” 100 grama. Ankoatra izay, mafimafy izy ka manosika ny vatana hiasa handevona hanina haingana. Azonao atao ihany koa anefa ny misotro ny ranony, saingy mba hampandaitra azy haingana dia aleo mifady sakafo be menaka, na be lafarinina :
· Andrahoina ao anaty rano mangotraka mandritra ny 5 minitra ny “haricot vert” 1 tanana.
· Potsehina ao anaty “mixer” avy eo.
· Asiana rano 1 vera.
· Asiana sira, na tongolo gasy.
· 1 vera isan’andro no sotroina.
Araka ny nambaran’ireo mpikaroka dia “haricot vert” 1 tasy ihany dia ampy ahazoana ireo voka-tsoa maro ireo. Ny tena idealy dia izy mbola mikarepoka no hanina, izany hoe : tsy masaka loatra, asiana saosy vinegrety amin’ny voasarimakirana.